Dayactir Lagu Sameeyay Qaar kamida Ceelasha Dhaadheer Ee Degmada Dhanaan - Cakaara News
Dayactir Lagu Sameeyay Qaar kamida Ceelasha Dhaadheer Ee Degmada Dhanaan
Dhanaan( cakaaranews )Arbaco 6dii April 2016, Koox uu hogaaminayo Madaxa Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha Degmada Dhanaan mudane Cabdirisaaq Maxamed Mursal ayaa dayactir ku soo sameeyay ceelasha dhaadheer ee ku kala yaala Qabaleeyada kala ah Burqayar, Bacaad, iyo Higlaale-biir
Hadaba, Madaxa Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha mudane Cabdirisaaq Maxamed Mursal oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in ay dayactir ku sameeyeen ceelasha dhaadheer ee ku kala yaala Santerada kala ah Burqayar, Bacaad, iyo Higlaale-biir. Wuxuuna intaa ku daray masuulku in maadaama xili jiilaal ah lagu jiro ay mudnaanta siiyeen dayac tirka ceelashaas islamarkaana ay wakhtiyar gudihii kusoo dhamaystiren shaqadii dayac tirka ahayd.
Dhinaca kale wuxuu xusay in kormeer ay ku sameeyeen mashaariicda lasoo gaba-gabeeyay Sandakan ee isugu jira Ceelasha biyaha ah, Baraagaha biyaha, iyo waliba Biyo-xidheenada kuwaas oo ay wada fuliyeen xafiiska biyaha Degmada Dhaanaan iyo hay’adaha ay bah- waadaagta yihiin.
Sikastaba ha ahaatee, madax-xafiiseedka ayaa tilmaamay in dhanka dayactirka ceelashan ay aad ugu riyaaqeen bulshadii kafaa iidaysanaysay maadaama oo ay aad ugubaahnaayeen. Wuxuuna carabka kudhaftay in mashaariicdan kala duwan ee biyaha ah ee laga fulinayo degmadan Dhanaan ay waxtar balaadhan u soo kordhin doonaan bulshada kadib markay adeega bilaabaan.
Ugudanabayna madax-xafiiseedka ayaa u mahadceliyay wasiirka xafiiska horumarinta khayraadka biyaha DDSI marwo Fartuun Cabdi Mahdi, Gudoomiyaha Gobolka Shabeele mudane Farxaan Cabdi Maajuun oo sheegay inay xilwayn iskasaaraan islamarkaana ay taageero balaadhan kagaysteen dayactirka iyo waliba kawarhaynta hawlaha biyaha Degmada Dhanaan.